Ithegi: uphando lwezinto eziphilayo | Martech Zone
Ithegi: uphando lwezinto eziphilayo
Uluqhuba njani uhlalutyo lomncintiswano ekuchongeni amathemba okwakha amakhonkco
NgoMvulo, Julayi 19, 2021 NgoMvulo, Julayi 19, 2021 UAleh Barysevich
Uwafumana njani amathemba amatsha e-backlink? Abanye bakhetha ukukhangela iiwebhusayithi ngesihloko esifanayo. Abanye bajonge izikhombisi zeshishini kunye neqonga lewebhu le-2.0. Kwaye abanye bathenga nje i-backlinks ngobuninzi kwaye bayathemba okona kulungileyo. Kodwa inye indlela yokubalawula bonke kwaye lukhuphiswano lophando. Iiwebhusayithi ezinxibelelana nabantu abakhuphisana nabo kusenokwenzeka ukuba zichaphazelekayo. Ngaphezu koko, kunokwenzeka ukuba zivulekele ubuhlakani be-backlink. Kwaye wena
Ukohlwaywa kwesiqulatho esiPhindiweyo: Intsomi, iNyaniso, kunye neNcebiso yam
Lwesine, Matshi 25, 2021 NgoLwesibini, Agasti 24, 2021 Douglas Karr
Kwisithuba seminyaka elishumi, uGoogle ebesilwa nenkolelo yesohlwayo somxholo ophindiweyo. Kuba ndisaqhubeka nokufaka imibuzo kuyo, ndicinge ukuba kufanelekile ukuxoxa apha. Kuqala, masixoxe nge-verbiage: Yintoni uMxholo weDuplicate? Umxholo ophindiweyo ngokubanzi ubhekisa kwiibhloko zomxholo ngaphakathi okanye kwimimandla ehambelana ngokupheleleyo nomnye umxholo okanye ofana ngokufanelekileyo. Kakhulu, oku akuyikhohlisi kwimvelaphi. Google, thintela iDuplicate
Izizathu ezili-10 zeSiza sakho ekulahlekeni kuLuhlu lwe-Organic… Kwaye kufuneka wenze ntoni
NgoLwesithathu, Oktobha 21, 2020 NgoLwesithathu, Oktobha 21, 2020 Douglas Karr
Zininzi izizathu zokuba iwebhusayithi yakho ilahlekelwe kukubonakala kwayo kokukhangela kwezinto eziphilayo. Ukufudukela kwisizinda esitsha- Ngelixa uGoogle ebabonelela ngeendlela zokubazisa ukuba ufudukele kwisizinda esitsha ngeKhonkco yokuKhangela, usekho umba wokuqinisekisa ukuba yonke i-backlink ephandle isombulula kwi-URL elungileyo kwindawo yakho entsha kunokuba ingeyiyo ifunyenwe (404) iphepha. Iimvume zesalathiso-ndibonile iimeko ezininzi zabantu
Iindlela ezili-10 eziQinisekisiweyo zokuqhuba iTrafikhi kwiWebhusayithi yakho yeEcommerce
NgoLwesibini, Agasti 20, 2019 NgoLwesibini, Agasti 20, 2019 ULaura Himmer
"I-Ecommerce Brands ijongene ne-80% yereyithi yokusilela" I-E-yorhwebo esebenzayo Ngaphandle kwezi nkcukacha-manani ziphazamisayo, uLevi Feigenson wenze ngempumelelo i-27,800 yeedola kwinyanga yokuqala yeshishini lakhe le-e-commerce. UFeigenson, kunye nenkosikazi yakhe, basungule uphawu lwezinto ezincedisayo ze-eco ekuthiwa yi-Mushie ngoJulayi we-2018. Ukusukela ngoko, akukho kubuya mva kubaniniyo nakwibhrendi. Namhlanje, uMushie uzisa i-450,000 yeedola kwintengiso. Kule minyaka yoqoqosho lokukhuphisana, apho iipesenti ezingama-50 zentengiso
Ixesha elingaphezulu, izinto ezilindelwe kwiiwebhusayithi ziye zavela. Olu lindelo lubeka imigangatho yendlela yokwenza ubuchule kumava omsebenzisi ekufuneka enikezwe sisiza. Ngomnqweno wee-injini zokukhangela ukubonelela ngezona ziphumo zichanekileyo nezona zonelisayo kukhangelo, ezinye zezinto zibekiwe zithathelwa ingqalelo. Enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kule mihla ngamava omsebenzisi (kunye nezinto ezahlukeneyo zesiza ezinegalelo kuyo.). Kungathathwa ke ukuba i-UX ibalulekile